Article submitted by: Thunderbolts on 9-Aug-2013
မပြောခြင်လဲ ပြောရတော့မယ် (၂ )
၁၉၈၈ ခု အရေးအခင်းဟာ ဘယ်သူလက် ချက်လဲ ၊ ကျုပ်က မသိလို.မေးတာနော် ၊ လမ်းပေါ်ကလူတွေ လက်နက်ကိူ်ငဆောင်ခြင်းမှရိဘူးတဲ့လား။ နိုငံတကာမကြည်ခြင် မမြင်ခြင်မှ စက်သေနတ်က မီးဖိုချောင် သုံး ဒါးပါးလေး
ပါကိုင်သူတွေက . လူသတ်မီးရှိုခဲ့တာတွေကို အဆူံး စာစောင်အမျိုးမျိုးက ဓါတ်ပုံသတင်းတွေအဖြစ် ဖေါ်ပြခဲ့ကြတယ် ။
အတိုက်အခံ ကို ထောက်ခံ မြောက်ပေးတာ ရေဒီယိုတွေရူပ်မြင်သံကြားတွေ
ကတော့ သိသိသာသာဘဲ။ လူမျိုးစုတပ်ဖွဲ.တွေ ကိုင်တဲ့ ခေတ်မီ လက်နက်
ခဲယမ်းတွေဟာ ဘယ်ကရသလဲ ၊ တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ အနောက်အုတ်စ
ုက ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ် ။
အပစ်ရှိတယ်ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ် သန်းရွှေနဲ့ တကွ န၀တ တဖွဲ.လုံးကိုဘာကြောင့်
ခုံရုံးမတင်သလဲ ၊ ဘာကြောင့်သိန်းစိန်နဲ့အဖွဲ.လက်ခံသလဲ၊ အသိအမှတ်ြ့ပု
သလဲ ဘာကြောင့် အနောက်ဖက်က စိတ်ပြောင်းသွားသလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေ
တသီတတန်းကြီးဘဲ။ ကျုပ်မသိဘူး၊ စံဇာနီဘိုတို ဇာဂနာတို.များ သိမလား မပြောတတ်ဘူး။ ထင်စရာတွေများတာဘဲရှိတယ် ။
ထင်တာတခုက.န၀တ နအဖ တွေဟာ အတိုက်အခံတွေပြောသလို အပစ်မရှိ လိုဘဲ ၊ တကယသာရှီခဲ့ရင် NLD ကရော ဘယ်လို လက်တွဲ နိုငရတာလဲ ၊ နိုငငံတော် နဲ့ နိုင်ငံသားတိုါအကျိုးတဲ့လား ၊ ယုံခြင်တာသာ ယုံကြတော့။
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေဟာ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်မဟုတ်ဘူး ၊ စောမောင် ခင်းတဲ့ဖျာ
ပေါ် သန်းရွှေ ထိုင်ခဲ့တာဘဲ ။ လောကဓမ္မတာကိုက ဒီလိုဘဲ။
“ပါနာတိပါတာ ဝေရမဏိ သိက္ခာ ပဋာန်သမာဓိယာမိ” ဆိုရင် အစာငတ်ခံပေ
တော့ အသီးလဲမစားနဲ့ အရွက်လဲမ၀ါးနဲ.၊ ရေလဲ မမျိုနဲ့ ၊ အားလုံးထဲမှာ သာမန်
မျက်စေ့နဲမမြင်ရတဲ့ အသက် တွေပါတယ်။ မြင်မြင် မမြင်မြင် သတ်ရင် သတ်
အနောက်တိုင်း အယူအဆကတော့ KILL OR BE KLILLED လို.ဆိုတယ်ဈ လက်တွေ.လဲ ကျင်.သုံးနေ တယ်။ သူတိုတိုင်းပြည်တွင်းမှာ နေစဉ်နဲ့အမျှ သတ်ဖြစ်နေတယ်. နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးလဲ သူများတွေကို သတ်နေတယ်။ ဒါဟာ မျက်မြင် ဘဲ၊ လက်ခံခြင်ခံ မခံရင်နေ၊
မြန်မာ့ တပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံတော်သား တိုကို ကာကွယ်စောင့်
ရှောက်နိုင်ဘို.ရာ အဓိက ဒီတာဝန်ကို ကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ဘို.၊ ကိုယ့်
ကိုကိုယ် လိုအပ်ရင် ကာကွယ်ဘို.လက်နက်နဲ့ဘဲဖြစ်စေ လက်နက် မပါဘဲဖြစ်
စေ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ရမယ် ။
အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး ကို အားမကိုးပါနဲ. ငြိမ်းချမ်းရေ. မနက်ဖြန်ရတော့
မယ်လို. သေချာပေါက်မတွက်ပါ နဲ.၊ ၆၆ နှစ်ကာလမှာ အစိုးရအဆက်ဆက် အပါတ် ခံရတာတွေ များလှပါပြီ ၊ မနဲတော့ပါဘူး ။ ဒီမိုကရေစီ ဆို တာ အနောက်ဖက်ရဲ လက်သုံးစကားပါ။ မြန်မာနိင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ကို မယုံသူတွေ
လက်မခံသူတွေ ၁၉၄၈ ခုကတည်းကရှိ ခဲ့တာဘဲ ၊အမြဲလဲ ရှိနေခဲ့တယ်။
ဒီမိုကရေစီ ထမိန်ခြုံလို. လဒ (လင်းတ)တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ၊ သူတိုအသက်ရှင်ဘို.
အသေကောင်ကို စားဘို. စောင့်နေ ကြတယ်။ မသေရင် သေအောင်သတ်ကြ
လိမ့်အုံးမယ်။ ပွဲကြီးပွဲကောင်းများဆိုရင် လူစည်တတ်ပါတယ် ။
ဥပဒေတွေကို စာအုပ်ထဲမှာ ပြဌာန်းထားရုံနဲ.မပြီးဘူး ။ ဒီဥပဒေတွေဟာ မြန်မာ
တနိုင်ငံလုံး ပြန်.နှံ. သက်ရောက်ရမယ် ။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ဆိုတာ အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ဒေသ ၊ မအုပ်ချုပ်တဲ့ဒေသ သို.မဟုတ် ဥပဒေလက်လှမ်းမမီတဲ့ ဒေသ ဆိုတာ စကားအရတောင် မရှိသင့်.ဘူး ။ ဥပဒေထိမ်းသူတွေကိုယ်တိုင် ဥပဒေလိုက်နာပြီး ဘောင်ထဲ စည်းကမ်းထဲက လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဘို.လို တယ် ၊ ထိမ်းသိမ်း ထိရောက်စေဘို.လိုတယ်။
တပ်မတော်ဟာ တပ်မတော်အလုပ်လုပ်ဘိုရန် ဖြစ်တယ် ၊ ကြိုက်သူရှိမယ် မကြိုက်သူရှိမယ် တပ်မတော်ာဝန်ကို ကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ရမယ် ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပြော့ညံ့ချိနဲ့နေလို.မဖြစ်ဘူး၊ ပြောရရင် နွားအုတ်လဲမကွဲ . ကျားလဲ မဆွဲသာအောင် တပ်မတော်က ကာကွယ်ရမယ် ဖြစ်တယ်။ တပ်မတော် ဟာ ဘယ်ပါတီ မိတ်ဆွေမှ မဟုတ်ဘူး။
တော်သေးပြီ နောက်ကြုံတော့ ဆက်ပြောအုံးမယ်။